"CLIR" "megaphone" - isevisi ebalulekile, okwathi nakuba hhayi kaningi, kodwa kufanele usebenzise iningi ababhalisile. Njengengxenye lesi sihloko kuzoxoxwa ngu uxhumano yayo futhi Ukukhipha. Lutho kuyinkimbinkimbi ngakho, ngakho uzizwe ukhululekile ukuthatha wenze.
Uma udinga kusebenze isevisi "CLIR" "megaphone", bese-ke kungenziwa ngezindlela ezilandelayo:
Ukuthola isicelo * 105 * 501 # bese ucindezela inkinobho yokushaya. Emva ekucubunguleni iseva ngesicelo opharetha uzothola umlayezo mayelana uxhumano ngempumelelo inkonzo. Ukuqalisa ngokwayo kubiza ruble 10 namuhla, futhi nsuku zonke subscription Imali kuyinto ruble 5 kuya ku-15 kuya ku-isifunda sakho.
Sinxusa yamahhala inombolo 0500. Khona-ke, elandela iziyalezo umshini yokuphendula, ukuxhuma opharetha. Sikucela ukuba kusebenze le sevisi. Ngesikhathi esifanayo sidinga imininingwane iphasipoti, ukuze sikwazi ukulungiselela kusengaphambili.
Kulo mBhalo, udinga ikhompuyutha exhunywe kwi-inthanethi. Ngemva kwalokho, usebenzisa injini yokusesha (isib, rambler.ru noma yandex.ru), sithola website yesifunda opharetha mobile. Ekhoneni eliphezulu kwesokudla kuyinto eliqoshwe umbhalo othi "I-akhawunti yami". Ingabe kuye kwesokudla chofoza manipulator. Khona-ke ubambe ifoni futhi ukuthumela isicelo * 105 * 00 #. Impendulo kumele beze iphasiwedi ukufinyelela "Akhawunti Yami". a yayo kumele sikhumbule. Khona-ke, ngo-kwefasitela lesiphequluli, faka emkhakheni wokuqala inombolo kamakhalekhukhwini kunoma yisiphi isakhiwo. Owesibili - iphasiwedi oyithole eziphendula USSD-isicelo. Khona-ke sithola imenyu inkonzo ulifake.
Kufanele futhi usho isevisi njenge "CLIR eyodwa-off" "megaphone". Isebenza ngesikhathi esisodwa ucingo ethile kuphela. Kuze kube yimanje, e inqubo Ukudayela ekuqaleni sengezwe * 31 * PHONENUMBER futhi inkinobho ukubiza. Izindleko le sevisi ruble 15 namuhla. Le mali kuhoxiswa ngesikhathi ikholi ngayinye enjalo.
Ungakhohlwa ukuthi CLIR "megaphone" owabelwe. Ngakho-ke, lokhu ikakhulukazi ezimweni lapho isevisi asikho isidingo, kungcono off. Kungenjalo izosuswa nsuku subscription Imali, futhi leyo mali kuxhomeke esifundeni sakho. Ubukhulu bayo esiphezulu - ruble angu-15. Usuku olulodwa kancane. Kodwa uma uthatha ngenyanga, uthola ruble 450, wena nje ukunikeza weselula. Khansela isevisi ngezindlela ezilandelayo:
Nge isicelo esikhethekile * 105 * 501 * 0 #. Bese ucindezela inkinobho yokushaya. Ngaphezu kwalokho, umlayezo kufanele angene ngaphakathi 5-10 imizuzu ukuthi inkonzo ikhutshaziwe ngempumelelo. Lena yi-version elula kanjani ukukhubaza CLIR "megaphone".
Ungase futhi ushayele inamba yesikhungo sesevisi "megaphone" opharetha 0500. Ngemva kwalokho, ngokulandela imiyalelo avtoinfomatora, xhumana no-opharetha bese ucela ukukhubaza le sevisi. Iphasiphothi Kulokhu ayidingekile. Kodwa-ke kudingeka ulinde umlayezo wombhalo mayelana nendlela ukukhubaza le sevisi.
Ukusebenzisa uhlelo "I-akhawunti yami" kanye computer siqu uxhumeke kwi-web global. Ngaphambili ebekwe opharetha lesifunda uyakwazi ukuthola indawo futhi iya kumenyu isevisi. Emasimini, faka inombolo yocingo kanye nephasiwedi, eye wathola ngaphambilini. On the Amathuluzi imenyu sithola CLIR bese uyikhubaze.
Njengengxenye yalolu impahla ezibhekwa izindlela ezahlukene kanjani amandla uphinde ukhubaze CLIR ( "megaphone"). Uma konke kwenziwa ngokuhambisana imiyalelo ebekwe, khona-ke akufanele ube nenkinga yokukholelwa. Uma into akusebenzi, kungcono ukuphinda wokuqala, ngenkathi elandelayo ngokucophelela imiyalelo. Ngazo zonke izindlela ngesikhathi esifanayo ungatholi ukujabulela. Ngakho-ke, kungcono ukhethe noma iyiphi enye yazo futhi bawusebenzise njalo.
Smartphone Samsung Grand Duos: izici kanye nokubuyekeza
Jacket Tactical: izici imodeli kanye nezincomo lapho ukhetha
Iwebhusayithi Goappcash: ukubuyekezwa, ukuhoxa
Montignac Ukudla ekudlayo: Yidla kanye sikhule mncane